अर्थमन्त्री खतिवडाले दिए राजीनामा : RajdhaniDaily.com -
Home Breaking News अर्थमन्त्री खतिवडाले दिए राजीनामा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदबाट राजिनामा गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजिनामा बुझाएका हुन् । त्यसअगाडि उनी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बिदाई कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
मन्त्री खतिवडाले आफूले जग बसालेर बिदाइ भए पनि त्यसलाई निरन्तरताको जिम्मेवारी कर्मचारीमा रहेको धारणा राखेका थिए ।
म्युनिख । जर्मनीको बोरुसिया डर्टमण्ड र पोर्चुगलको एफसी पोर्टो युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा पुगेका छन् । बुधबार बिहान भएको राउण्ड अफ सिक्सटिनको...
उपचारको क्रममा निधन भएकी महिलामा कोरोना आशंका, परिवारका सदस्य क्वारेन्टाइनमा
सिरहा । सिरहाको लहान नगरपालिका स्थित सप्तऋषि अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक महिलाको सोमबार निधन भएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको आशंका गर्दै...
Breaking News Kumar Raut - November 27, 2020 0
प्रदेश ३ Dhruba Lamsal - February 17, 2020 0
Not-to-be-missed Dhruba Lamsal - November 24, 2020 0